အနာဂတ်သည်ယခုအချိန်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက်သင်ကြားမှုဆိုင်ရာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာအရေးပါ - ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကင်ပိန်း
Tony Jenkins မှ PhD *
အယ်ဒီတာများနိဒါန်း။ ဤသည်၌ Corona ဆက်သွယ်မှုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ပိုမိုနှစ်သက်သောအနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းတို့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးသင်ကြားသူများအတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်ကို COVID-19 မှတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟုတိုနီဂျင်ကင်ကသုံးသပ်သည်။
မှတ်ချက် 4th ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် Gandhi Smriti & Darshan Samiti (Gandhian လေ့လာရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးသုတေသနဌာန၊ နယူးဒေလီ) မှ ဦး ဆောင်ကျင်းပသော“ E-Dialogue” သည်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အနာဂတ်အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပါမောက္ခဗီဒီယာဂျိန်းသည်အီး - တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအတွက်အကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားသောအခါငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးနှင့်ကူးစက်ရောဂါအကြားဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်စိတ်ကူးကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ COVID-19 မှပေါ်လွင်။ ပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေသောမတရားမှုနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးအတားအဆီးများကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး၏အခန်းကဏ္ transform နှင့်အသွင်ပြောင်းလဲမှုအလားအလာများကိုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်နှာပြင်အောက်သို့စေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အဆိုပါ coronavirus, အများစုဖြစ်ရပ်များအတွက်, ရိုးရိုးရှိပြီးသားသောအရာကိုမြင်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးသုတေသီများသည် neoliberalism ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကိုဆယ်စုနှစ်များစွာမီးမောင်းထိုးပြခဲ့ကြသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ထိခိုက်လွယ်သောလူ ဦး ရေအပေါ်အချိုးအစားမညီမျှမှုသက်ရောက်မှုဝမ်းနည်းစွာကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ယခုအခါတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးသည်ဤအရေးကြီးသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းအားစနစ်များနှင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်နေရာသို့ရောက်ရှိသွားစေသည့်ကမ္ဘာ့အမြင်သဘောထားများကိုစစ်ဆေးရမည်။ အရေးကြီးသောငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်မတရားမှုစနစ်များကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်အတွက်သင်ကြားပို့ချမှုအရသိရသည်။ ထို့အပြင်အရေးကြီးသောငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးသည်အရေးကြီးသောအသိစိတ်ကိုမွေးမြူရန် -“ နိုးကြား” ရန်နှင့်အရာများမည်သို့ဖြစ်သင့်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်းကိုစိန်ခေါ်ရန်အတွက်ဘက်စုံလေ့လာသင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
အရေးကြီးသောအစီအစဉ်များတွင်အရေးကြီးသောငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသည်။ COVID-19 ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခြင်းနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလူမည်းများအပေါ်ရဲတပ်ဖွဲ့အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်မကြာသေးမီကဖြစ်ပွားခဲ့သောဆူပူအုံကြွမှုများဖြစ်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကဲ့သို့သောဝေါဟာရများကိုကြည့်ရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်အံ့သြမိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထင်မြင်ချက်ကိုအခြေခံသောငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး၏ဆွေမျိုးထိရောက်မှုအားဖြင့်တရားဝင်ကျောင်းပညာရေးသည်၎င်းကိုအခြေခံထားသည့်သိမြင်မှုစွမ်းရည်အချို့အထူးသဖြင့်သရုပ်ခွဲစဉ်းစားခြင်းမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကိုမြှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှိသည်ဟုတိုးမြှင့်နိုင်သည်ဟုထင်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်အရေးကြီးသောငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးသည်ရိုးရာကျောင်းများတွင်အလေးပေးထားသောအပြုသဘောသင်ကြားရေးပုံစံများမှရယူထားခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ အရေးပါသောငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးသည်ကျောင်းသားများကိုအခြေခံကျကျစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနှင့်သင်ယူမှုပုံစံအသစ်များနှင့်မိတ်ဆက်ပေးရန်မလိုအပ်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်, ဒီ rosy ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အဓိကအသိပေးချက်ရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကား, 21 ၏ဤအစောပိုင်းဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်st ရာစုနှစ်၊ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကီဗင်ကတ်စတာ (၂၀၂၀) သည်အမှန်တရားလွန်ခေတ်ဟုဖော်ပြသောအချိန်ကာလသည်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပူးပေါင်းပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ "အမှန်တရား" ရှုပ်ထွေးဖြစ်လာသည်။ နက်နက်နဲနဲစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းနှင့်ကိစ္စရပ်တစ်ခုအပေါ်အရင်းအမြစ်များနှင့်ရှုထောင့်မျိုးစုံကိုစစ်ဆေးခြင်းထက်များစွာသောသူတို့သည်ထင်မြင်ချက်အပိုင်းများကိုသာရှာဖွေကြသည် - သို့မဟုတ်ဆိုရှယ်မီဒီယာ algorithms များမှဆောင်းပါးများဖြစ်သည်။ ထပ်မံ၍ ဤပြdilနာကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်းသည်နိုင်ငံရေးအစီအစဉ်များကိုဖော်ထုတ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမဟာဗျူဟာတစ်ခုအဖြစ်ရုတ်တရက်လိမ်ညာနေသောနိုင်ငံရေးသမားများဖြစ်သည်။ အမှန်တရားရှေ့မှောက်တွင်လိမ်ပြောခြင်းသည်အစီအစဉ်ကိုသူတို့ထိန်းချုပ်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ အမှန်တရားကိုထူထောင်ခြင်းသည်မုသာကိုပယ်ဖျက်ခြင်းထက် ပို၍ ခက်ခဲလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်လျက်ရှိသောအမှန်တရားလွန်ခေတ်ကိုသတိပြုမိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အတွေးအခေါ်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်အရန်ကူးယူရန် - သုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအခေါ်များကိုသုတေသနပြုခြင်းထက် ကျော်လွန်၍ - ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအတွက်ကျောင်းသားများ၏စွမ်းရည်ကိုပိုမိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ပွင့်လင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွယ်တူချင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများသည်သူတို့၏ယုံကြည်ချက်များကိုယုံကြည်စိတ်ချစေရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းသူတို့၏အမြင်များနှင့်ထင်မြင်ချက်များကိုထင်ဟပ်ခြင်းနှင့်စိန်ခေါ်ခြင်းအားဖြင့်ပြောင်းလဲမှုကိုအမြဲတမ်းပွင့်လင်းစွာထားခြင်း၏အရေးကြီးမှုကိုသူတို့အားသင်ကြားပေးရမည်။
ဖြေရှင်းရန်နောက်ထပ်အဓိကအတားအဆီးတစ်ခုမှာအရေးကြီးသောငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးသည်လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအဆောက်အအုံများကို အခြေခံ၍ စာသင်ကျောင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းများကိုအဓိကထားသည်၊ စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးအထက်တန်းလွှာများကချမှတ်ထားသည့်မူဝါဒများဖြင့်အုပ်ချုပ်သည်။ အစိုးရအရာရှိများသည်အရာရာကိုအမြန်ဆုံး“ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်” ရန်ပြန်လိုကြသည်။ အမှန်စင်စစ်အားဖြင့်လူများစွာ - အထူးသဖြင့်စတင်နိုင်စွမ်းအားနည်းသူများ - သည်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအရေးကြီးသောလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေသည်။ ကူးစက်ရောဂါ၏စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေးနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများမှာတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ သို့သော်“ ပုံမှန်ပြန်သွားခြင်း” သည်ယခင်“ ပုံမှန်” အခြေအနေများအောက်၌ခံစားနေရပြီးသောသူများနှင့်တစ်စုံတစ်ရာထူးခြားမှုရှိမည်လော။
ပေါ်ပေါက်လာသောမေးခွန်းတစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ကြားရေးကိုထိထိရောက်ရောက်မဖြေရှင်းနိုင်သေးဟုထင်မြင်သည့်မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သင့်သည် “ ပုံမှန်အသစ်” ကူးစက်ရောဂါပြိုလဲသောအခါကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ပြန်သွားလိုသည့်ကမ္ဘာကြီးသည်မည်သို့ဖြစ်သင့်သနည်း။
ဤသည်၏ "၏ထင်ရှားတဲ့ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်Corona ဆက်သွယ်မှုများ“” ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကင်ပိန်းအတွက်ကျွန်တော်တည်းဖြတ်နေတဲ့ဆောင်းပါးတွဲတွေ၊အသစ်ကသာမန်။ " နောက်ကျောမေလအတွက်ကျနော်တို့တင်ခဲ့သည် ပုံမှန်ပုံစံအသစ်တစ်ခုကိုပြသသည်, လက်တင်အမေရိကငြိမ်းချမ်းရေးသုတေသနကောင်စီ (CLAIP) ကမြှင့်တင်ခဲ့သည့်ဤလှုပ်ရှားမှုသည်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက်အရေးကြီးသောဤအချက်ကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်ရန်ကူညီခဲ့သည်။ CLAIP မှ“ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်ကျွန်ုပ်တို့တုန့်ပြန်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံမှန်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အဖြစ်သတ်ဖြတ်ခြင်းကိုမပြုလုပ်ပါ။ ” ထို့ထက်ကား ပို၍ ရှင်းလင်းစွာပြောရလျှင်“ ဗိုင်းရပ်စ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောဖျားနာမှုပုံမှန်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ”
အဆိုပါ ပုံမှန်ပုံစံအသစ်တစ်ခုကိုပြသသည် ဝေဖန်မှုတစ်ခုထက်မကကမ်းလှမ်းသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဆီသို့ကြိုးပမ်းရန်ပုံမှန်စံနှုန်းသစ်တစ်ခု၏ကျင့်ဝတ်နှင့်မျှတသောအမြင်ကိုဖော်ထုတ်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လွတ်လပ်မှုလမ်းကိုလေ့လာရန်နှင့်ယခင်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ကပုံဖော်ထားသည့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကိုသဘောတူလက်ခံမှု၏ကိုလိုနီခေတ်အတွေးအခေါ်နှင့်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်လိုအပ်သောစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအချို့ကိုထွန်းလင်းစေခဲ့သည်။
ငါကြည့်တယ် ပုံမှန်ပုံစံအသစ်တစ်ခုကိုပြသသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံသားပညာကိုသင်ကြားရန်အလားအလာရှိသောသင်ယူမှုမူဘောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းမှတင်ပြသောမေးမြန်းချက်အချို့သည်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်သင့်သည့်လူနေမှုအဆင့်အတန်းအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဘောင်တစ်ခုကိုစဉ်းစားရန်ကူညီသည်။
တစ်ခုမှာ ကြေညာစာတမ်း ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ပိုမိုနှစ်သက်သောအနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းတို့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးသည်အနာဂတ်ကိုပိုမိုအလေးပေးရန်လိုအပ်သည်ဟူသောအချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာသင်ယူမှုအများစုသည်အတိတ်ကိုအလေးထားသည်။ ဒါဟာရှေ့ကိုကြည့်ခြင်းထက်နောက်ပြန် - ကြည့်ရှုသည်။ ကျနော်တို့တိုင်းတာနိုင်သောနှင့်ပင်ကိုယ်မူလ, ငါတို့တွေ့မြင်နိုင်သည်ကိုအဘယျသို့ဖွစျခဲ့ပါဝေဖန်ဆန်းစစ် - ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်ဖြစ်သင့်သည်အရာကိုအနည်းငယ်အာရုံစိုက်ပေးပါ။
ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးသည်အနာဂတ်ကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့်ပိုမိုနှစ်သက်သောအနာဂတ်ကိုမျှော်မှန်းခြင်း၊ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ စီစဉ်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်း။
နိုင်ငံရေးအစစ်အမှန်သည်လူ့ဘောင်၏အုပ်ချုပ်မှုအပေါ်အခိုင်အမာခိုင်မာစွာချုပ်ကိုင်ထားသည့်လောကတွင်၊ utopian အတွေးအခေါ်သည်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောအရာအဖြစ်ပယ်ချခံခဲ့ရသည်။ သို့သော်လည်း၊ utopian ရူပါရုံများသည်လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုများကိုမြှင့်တင်ရာတွင်အမြဲတမ်းအရေးကြီးသောကဏ္roleမှပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ထင်ရှားသောငြိမ်းချမ်းရေးသုတေသီနှင့်ပညာပေးသူ Elise Boulding က utopian ပုံရိပ်သည်လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုကိုမည်သို့ဆောင်ရွက်သည်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ၁) လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုသရော်စာနှင့်ဝေဖန်ရန်၊ (၂) လူ့အခွင့်အရေးများကိုပိုမိုစည်းရုံးရန်ပိုမိုလိုလားသောနည်းလမ်းကိုဖော်ပြရန် (Boulding, 1) ။
ဘက်တီ Reardon (2009) သည်အလားတူသွေးကြောဖြင့် utopian ပုံရိပ်၏တန်ဖိုးကိုဖော်ထုတ်သည်။
Utopia သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်ပြီးစိတ်ထဲ၌ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးပမ်းနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုအနေဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ သန္ဓေတည်ခြင်းမရှိလျှင်၊ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းအသစ်တွင်လူသားများကဲ့သို့ဘဝအသစ်သည်လက်တွေ့ဖြစ်မလာနိုင်ပါ။ Utopia သည်အယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူမှုရေးဆိုင်ရာပုံစံသစ်ဖြင့်ဘဝသစ်သည်ရှင်သန်နိုင်သောနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်နှင့်မွေးဖွားလာသည့်လူမှုအသွင်ပြောင်းမှုသို့ရင့်ကျက်လာနိုင်သည့်သင်ကြားမှုအစမှဖြစ်သည်။ ငါတို့ယဉ်ကျေးမှုကိုငြိမ်းချမ်းရေး၊ ကမ္ဘာသစ်အဖြစ်မှန်ဟုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ မွေးရာပါအယူအဆမရှိလျှင်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောကမ္ဘာတစ်ခုအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမှအဖြစ်မှန်သို့ပြောင်းလဲရန်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျန်ရှိနေတဲ့အချိန်နည်းနည်းလေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးကဏ္ education ကဒီအနာဂတ် ဦး တည်ချက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုသင်ကြားပေးနိုင်မလဲဆိုတာအတွက်အခွင့်အရေးများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများကိုစူးစမ်းချင်တယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြပ်အတည်းကိုဖြုတ်ပစ်လိုက်ရုံနဲ့စကြရအောင် ကျွန်ုပ်တို့သည်အနာဂတ်၏ပုံမှန်အားဖြင့်ရရှိထားသည့်ပုံရိပ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိကမ္ဘာ၏အတွေ့အကြုံနှင့်အတိတ်၏အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုများတွင်အမြစ်တွယ်နေသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်အနာဂတ်၏အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏သိမြင်မှုသည်မကြာခဏဆိုသလို linear projection၊ အလွန်အစစ်အမှန်သမိုင်းအတွေ့အကြုံများတွင်အမြစ်တွယ်နေသောပစ္စုပ္ပန်အခိုက်အတန့်၌ရှိသောအဆိုးမြင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအတိတ်လမ်းကြောင်းများ၏အခြေခံဆက်နွယ်မှုများဖြစ်သည့်“ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအနာဂတ်” ကိုစီမံရန် ဦး တည်စေသည်။
ဤအတွေးအခေါ်သည်ငါတို့၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများတွင်လူငယ်များကိုရည်ရွယ်သော dystopian ဝတ္ထုများနှင့်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့်ဖမ်းယူခြင်းနှင့်ခိုင်မြဲခြင်းဖြစ်သည်။ အခုတော့ငါ့ကိုမှားအောင်မလုပ်နဲ့၊ ငါ dystopian ဝတ္ထုကောင်းတစ်ပုဒ်ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်ကိုကြိုက်တယ်၊ ငါတို့လမ်းမပြောင်းဘူးဆိုရင်လာမယ့်အကြောင်းသတိပေးတယ်။ သို့သော် dystopian မီဒီယာသည်အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအခေါ်ကို“ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော” (ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိလမ်းကြောင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ဖြစ်နိုင်သည်) မှ“ ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သော” တရားမျှတသောအနာဂတ်သို့ပြောင်းလဲရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမကူညီပါ။ ကျောင်းသားများ (သို့) လူကြီးများနှင့်အနာဂတ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို ဦး ဆောင်သည့်အခါဤအတွေးထောင်ချောက်သည်အဓိကအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုမိုနှစ်သက်သောအနာဂတ်ကမ္ဘာတစ်ခုကိုကျောင်းသားများအားစဉ်းစားရန်နှင့်ဖော်ပြရန်တောင်းဆိုသည့်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်တောင်းဆိုသောအခါ“ တကယ့်ကိုခဲယဉ်း!” ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်“ ဖြစ်ပျက်တော့မည့်အရာကိုစဉ်းစားခြင်းကိုရပ်တန့ ်၍ မရနိုင်ပါ” သို့မဟုတ်အနာဂတ်၏ ပို၍ utopian ပုံရိပ်ကိုဖော်ပြရန်“ လက်တွေ့မကျဟုခံစားမိ” သည်။
လူသားများသည်၎င်းတို့ကိုပြင်ပမှမလုပ်ဆောင်မီသူတို့၏စိတ်ထဲတွင်အမှန်တရားကိုတည်ဆောက်ကြောင်းနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်အနာဂတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့တွေးသည်ဆိုသည်မှာလက်ရှိလုပ်ဆောင်မှုများကိုပုံသွင်းသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနာဂတ်အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအမြင်များရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိလမ်းစဉ်ကိုပြောင်းလဲရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်မှကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအနာဂတ်ပုံရိပ်များကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါကလက်ရှိအပြုသဘောဆောင်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဤအရာသည်ဒတ်ခ်ျသမိုင်းပညာရှင်နှင့်အနာဂတ်ဝါသနာရှင် Fred Polak (Boulding, 2000 ဘာသာပြန်ထားသောနှင့်ရည်ညွှန်းထားသည့်အတိုင်း) လေ့လာခဲ့သောအရာဖြစ်သည်။ သူကသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်အနာဂတ်၏အပြုသဘောဆောင်သောပုံရိပ်များကိုထိန်းသိမ်းထားသောလူ့အဖွဲ့အစည်းများသည်လူမှုရေးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောပုံရိပ်များကင်းမဲ့သောလူ့အဖွဲ့အစည်းများသည်လူမှုရေးယိုယွင်းမှုသို့ကျဆင်းသွားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
စိန်ခေါ်မှု၏တစိတ်တပိုင်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏ပညာရေးသည်အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံနည်းလမ်းများနှင့်နည်းလမ်းများကိုသင်ယူသူအားလုံလောက်စွာစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ စဉ်းစားရန်နှင့်နှစ်သက်သောအနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ရန်စိတ်ကူးစိတ်သန်း၊ ဖန်တီးမှုနှင့်ကစားရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ပရောဂျက်အတွက်အသုံးဝင်ဆုံးသောအတွေးအခေါ်ပညာရှင်များစွာဟာဖန်တီးမှုအနုပညာကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့တာအံ့သြစရာတော့မရှိပါဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောအတွေးအခေါ်ပုံစံများဖြစ်သောအနုပညာ၊ တေးဂီတ၊ လူသားမျိုးရိုးဗီဇကိုလက်ခံနိုင်သောသင်ရိုးညွှန်းတမ်းသို့မဟုတ်ကျောင်းဘာသာရပ်သည်ဆယ်စုနှစ်များစွာမျှ neoliberal ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၏ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများသည်လက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေတွင်ကျောင်းသားများပါ ၀ င်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်ဟုမယူဆပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတစ်ချိန်ချိန်တွင်ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှများစွာသော“ မင်းဒီဘွဲ့နဲ့အလုပ်မရနိုင်တော့ဘူး” ဟုပြောခဲ့ဖွယ်ရှိသည်
ပိုမိုကောင်းမွန်သောအနာဂတ်ကိုစဉ်းစားရန်မိမိကိုယ်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းစဉ်းစားရန်၊ သိရန်နှင့်ဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်ထိရောက်သောနည်းလမ်းများကိုလက်ခံရန်အနည်းဆုံးအားခေတ္တခဏလိုအပ်သည်။ ဒါကိုလုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။
Elise Boulding (1988) သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကစားခြင်းနှင့်ပုံရိပ်ကိုစိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုထုတ်လွှတ်ရန်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကစားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ Huizinga ကို ကိုးကား၍“ ကစားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆင်ခြင်တုံတရားသတ္တဝါများမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကစားခြင်းနှင့်ကစားခြင်းကိုသိသည် - ကစားခြင်းသည်အဓိပ်ပါယျမရှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ” (စ။ ၁၀၃) ) ။ လူကြီးများသည်ကစားသော်လည်းအလွန်ထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်းဖြစ်သည်။ လူငယ်များမှာမွေးရာပါလွတ်လပ်စွာကစားပိုင်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့်လူကြီးများမှာပြဇာတ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုစိတ်ကူးစိတ်သန်းပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ပုံရိပ်သည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုဖော်ထုတ်ရန်နောက်ထပ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Mary Lee Morrison (၂၀၁၂) ကိုကိုးကားရန်။
"ငါတို့ရှိသမျှသည်ပုံရိပ်ကို။ ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌နက်ရှိုင်းစွာကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွဲဆောင်မှုများ၊ အပိုင်းအစများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ အမြင်များ၊ အသံများ၊ အနံ့များ၊ ခံစားချက်များနှင့်ယုံကြည်မှုများကိုသယ်ဆောင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိတ်မှအဖြစ်မှန်သို့မဟုတ်စိတ်ကူးထားသောအဖြစ်အပျက်များကိုကိုယ်စားပြုသည်။ တစ်ခါတစ်ရံသူတို့သည်အနာဂတ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အိပ်မက်များကိုကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာကျွန်ုပ်တို့အိပ်နေစဉ်ဒီပုံရိပ်တွေကအိပ်မက်တွေထဲကိုရောက်လာတယ် တခါတရံစိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တွေထဲမှာ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဤပုံများသည်ကြောက်စရာကောင်းသည်။ တစ်ခါတလေတော့မှမဟုတ်ဘူး။
အိပ်မက်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ပျော်နေသောအိပ်မက်များကိုအိပ်မက်မက်ခြင်း၊ အနာဂတ်ပညာရေး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ပိုင်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအနာဂတ်အာရုံစူးစိုက်သောပုံရိပ်များ (Boulding, 1988) အပါအ ၀ င်ပုံရိပ်အမျိုးမျိုးအတွက်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ဤပုံစံသည်အခြားသူအားလုံးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်ဆွဲဆောင်သည်။ ဤသည်မှာ Warren Zeigler၊ Fred Polak နှင့် Elise Boulding တို့ကတီထွင်ခဲ့သောပိုမိုနှစ်သက်သောအနာဂတ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏ပုံစံဖြစ်သည်။ အဲလစ်သည် ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များတွင်“ နျူကလီးယားလက်နက်မပါသောကမ္ဘာကိုပုံဖော်ခြင်း” တွင်ကျင်းပသောအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးပညာပေးသူများစွာ၊ အထူးသဖြင့်အဆင့်မြင့်ပညာရေးတွင်လုပ်ကိုင်နေသောသူများသည်သူတို့၏ဖန်တီးမှုနှင့်အပျော်တမ်းနည်းစနစ်အချို့ကိုအသုံးချရာတွင်မသက်မသာခံစားရနိုင်သည်။ နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်မြင့်မားသောပညာရေးတွင်သင်ယူခြင်းသည်ထိုသို့မဖြစ်ဟုယုံကြည်ရန်အမြစ်တွယ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိထားခြင်းနှင့်ဖြစ်ခြင်း၏အကန့်အသတ်ရှိသောအတိုင်းအတာကိုအတည်ပြုသောပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများတွင်လည်းသင်ကြားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရွယ်တူချင်းများကကျွန်ုပ်တို့ကိုအထင်သေးနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်အတွက်ဖြစ်လေ့ဖြစ်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စာသင်ခန်းကိုဖြတ်ကျော်။ ကျောင်းသားများသည်ဖိနှိပ်ခံရသည့်လှုပ်ရှားမှုပြဇာတ်ရုံ၌ပါ ၀ င်ခြင်း၊ ရယ်မောခြင်း၊ ဖိနှိပ်မှု၏ဥပစာစကားများ, ဒါမှမဟုတ်ဂိမ်းကစား။ ကျွန်ုပ်တို့၏သက်တူရွယ်တူများမှလက်ခံခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပညာရေးလုံခြုံရေးအတွက်အရေးကြီးသည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုငြိမ်းချမ်းသောအနာဂတ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်ကျောင်းသားများအားဗဟုသုတ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်များရှိသည့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောသင်ကြားမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်အတားအဆီးဖြစ်စေသည်။
ကစားခြင်းနှင့်ပုံရိပ်ခြင်းများသည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုဖော်ထုတ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုရေးပြောင်းလဲမှုများအတွက်ပိုမိုပြည့်စုံသောသင်ကြားမှုဆိုင်ရာမူဘောင်အတွင်း၌သိရှိခြင်းနှင့်ဖြစ်ခြင်း၏ဤနည်းလမ်းများအားနေရာချထားရန်လိုအပ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က Betty Reardon (၂၀၁၃) သည်နိုင်ငံရေးအရသင်ကြားမှုသင်ကြားရေးအတွက်သင့်လျော်သောရောင်ပြန်ဟပ်မေးမြန်းမှုပုံစံသုံးမျိုးကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ကျင့် ၀ တ်နှင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းရှိသည့်ဤပုံစံ (၃) ခုသည်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လူမှုရေးပြောင်းလဲမှုများအတွက်တရား ၀ င်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောသင်ကြားမှုများတွင်အသုံးချနိုင်သောသင်ယူခြင်းဆိုင်ရာလက်တွေ့ကျမှုအတွက်ငြမ်းအဖြစ်အတူတကွအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
ဝေဖန် / သရုပ်ခွဲရောင်ပြန်ဟပ်မှု ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သောအရေးကြီးသောငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးနှင့်အဓိပ္ပါယ်တူသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြောင်းလဲမှုနှင့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာထိရောက်မှုတို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်းများကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေရန်အတွက်လိုအပ်သောအရေးကြီးသောသတိတစ်ခု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုထောက်ခံသည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာရောင်ပြန်ဟပ်မှု ဝေဖန် / ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရောင်ပြန်ဟပ်မှုကာလအတွင်းကြီးပြင်းလာသည့်လူမှုရေးအကြပ်အတည်းအားတုံ့ပြန်မှုအမျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်လျော်သောကျင့်ဝတ်နှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကိုစဉ်းစားရန်သင်ယူသူအားဖိတ်ကြားသည်။ စဉျးစားဆငျခွ / မွေးမြူရေး ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကအနာဂတ် ဦး တည်ရာကိုထောက်ပံ့ပေးပြီး၊ သူတို့၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာစကြ ၀ inာတွင်အမြစ်တွယ်နေသောပိုမိုနှစ်သက်သည့်အနာဂတ်ကိုမျှော်မှန်းရန်သင်ယူသူအားဖိတ်ခေါ်သည်။
ကျွန်ုပ်တုိ့သည်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုတောင်းခံမှု၏ဤပုံစံများကိုကျွန်ုပ်၏တရားဝင်နှင့်မဟုတ်သောသင်ကြားမှုနှစ်ခုလုံးတွင်သင်ကြားမှုဆိုင်ရာအခြေခံမူဘောင်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲထားပါသည် (Jenkins, 2019) ။ အကြှနျုပျ၏ sequence ကိုဆင်တူပေမယ့်အချို့ကဆက်ပြောသည်အတိုင်းအတာနှင့်အတူ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျောင်းသားများကိုကမ္ဘာသို့မေးမြန်းရာတွင်အထောက်အကူပြုရန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားဝေဖန်မှုဖြင့်စတင်သည်။ ငါကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာရောင်ပြန်ဟပ်မှုသို့သွားသည်၊ ကျောင်းသားများအားကမ္ဘာကြီးတည်ရှိနေမှုကိုသူတို့တန်ဖိုးထားမှုများ၊ သူတို့၏ကျင့်ဝတ်နှင့်ကျင့် ၀ တ်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိဆန်းစစ်ရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။ ၎င်းသည်လက်ရှိကျင့်ဝတ်မူဘောင်များကိုယူဆောင်လာရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါအလွန်အမင်း၏အသုံးပြုမှုကိုအားပေးပါတယ် ပုံမှန်ပုံစံအသစ်တစ်ခုကိုပြသသည် ယခုအချိန်တွင်ရန်၎င်း၏ဆိုင်တဲ့၏။ စိတ် ၀ င်စားသူများအတွက် Global Campaign သည် ၄ ​​င်း၏အသုံးပြုမှုအတွက်မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများကိုတီထွင်ပြီးထုတ်ဝေခဲ့သည်။ (“ လမ်းစဉ်အတိုင်းလျှောက်လှမ်းရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ကြားရေးစနစ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း” ကိုကြည့်ပါ) ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပCharterိညာဉ်စာတမ်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်းနှင့်ကုလသမဂ္ဂကြေငြာချက်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးယဉ်ကျေးမှုအပေါ်လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်စသည့်အခြားသောစံသတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာမူဘောင်များကိုအသုံးပြုရန်လည်းစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ တန်ဖိုးများ၊ သဘောထားများ၊ လက်တွေ့ကျကျငြိမ်းချမ်းသောကမ္ဘာကြီးတည်ဆောက်မှု၏အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ကျောင်းသားများအနေဖြင့်လက်ရှိဘ ၀ ကိုဤမူဘောင်များနှင့်သူတို့၏တန်ဖိုးများနှင့်မတူညီမှုကိုရှာနေသည်ဆိုပါကထိုနေရာမှကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်မည်သည့်အရာသည်ပိုမိုနှစ်သက်သည်ကိုစဉ်းစားရန်ဖန်တီးသောလုပ်ငန်းစဉ်များမှတဆင့်လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာ၊ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ဤအမြင်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကျောင်းသားများ၏စွမ်းရည်မြှင့်တင်မှုကိုထောက်ပံ့ရန်ကျွန်ုပ်အားအနာဂတ်အဆိုပြုချက်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ သက်တူရွယ်တူအကဲဖြတ်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ရန်နှင့်ရူပါရုံအားလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်သင်ကြားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာများဖော်ထုတ်ရန်အစီအစဉ်များချမှတ်ရန်ကျွန်ုပ်အားတိုက်တွန်းခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံမှလက်တွေ့ကျသောသင်ကြားရေးဆိုင်ရာအမြင်များကိုမျှဝေရန်ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ချက်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်မှာငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက်မျှော်လင့်ချက်နှင့်တရားမျှတပြီးငြိမ်းချမ်းသောအနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ရန်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်ပြန်လည်စဉ်းစားရန်လှုံ့ဆော်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးသည်အနာဂတ် ဦး တည်ချက်မပါဘဲ၊ အရေးကြီးသော၊ ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ဆိုင်သောအတွေးအခေါ်တစ်ခုထက်အနည်းငယ်ပိုနေဆဲဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာပေးများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ငြိမ်းချမ်းရေးယဉ်ကျေးမှုများတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ပညာပေးခြင်း၌အလွန်တကယ့်လက်တွေ့သင်ကြားမှုဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့အားတင်ပြခဲ့သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သောအကြမ်းမဖက်သောပြင်ပနိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်မှုပုံစံများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်များဖြစ်သောအတွင်းပိုင်းယုံကြည်မှုများကိုပျိုးထောင်ရန်သင်ကြားနည်းများကိုပြုစုပျိုးထောင်ရန်နည်းလမ်းများလည်းမရှာဖွေပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကြီးကိုအရေးကြီးသောနားလည်မှုရှိခြင်းသည်အနည်းငယ်သာဆိုလိုသည်။
စာသင်နှစ်အသစ်စတင်တော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ အနည်းဆုံးမြောက်ပိုင်းခြမ်းရှိသူများအတွက်ကျွန်ုပ်သည် COVID post ၏“ ပုံမှန်အသစ်” ကိုစဉ်းစားရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ရန်၊ စီစဉ်ရန်နှင့်တည်ထောင်ရန်အတွက်ဤမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောမေးမြန်းစုံစမ်းမှုများကိုပေါင်းစပ်ရန်ပညာရှင်များကိုတိုက်တွန်းပါသည်။ -19 ကမ္ဘာကြီးကိုသူတို့ရဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်းသို့။
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းနှင့်ဆရာ Betty Reardon (၁၉၈၈) ၏ကိုးကားချက်ဖြင့်နိဂုံးချုပ်ပါသည်။ “ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပညာဆည်းပူးလိုပါကဆရာများနှင့်ကျောင်းသားများနှစ် ဦး စလုံးသည်ကျွန်ုပ်တုိ့အတွက်ပညာပေးနေသောကမ္ဘာကြီးနှင့်ပတ်သက်သောအယူအဆအချို့ရှိရန်လိုအပ်သည်” ။ " ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက်အနာဂတ်သည်ယခုအချိန်တွင်အရေးကြီးသည်။
Tony Jenkins ပါရဂူဘွဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၉ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိပြီးငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုနှင့်နိုင်ငံတကာပညာရေးအစီအစဉ်များ၊ စီမံကိန်းများနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာမှုများနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ဦး ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအတွေ့အကြုံများရှိသည်။ တိုနီသည်ဂျော့ချ်တောင်းတက္ကသိုလ်ရှိတရားမျှတမှုနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာမှုအစီအစဉ်တွင်ကထိကဖြစ်သည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှစ၍ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း (IIPE) ၏အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှစ၍ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကင်ပိန်းညှိနှိုင်းရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုများနှင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုများကိုပြုစုပျိုးထောင်ရာတွင် Tony ပညာရေး၏သုတေသနပြုချက်သည်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးနည်းစနစ်များနှင့်သင်ကြားနည်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ထိရောက်မှုကိုဆန်းစစ်ရန်အဓိကထားသည်။ သူသည်ဆရာ၊ ဆရာမသင်တန်းများ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေး၊ စနစ်ဒီဇိုင်း၊ လက်နက်ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်ကျားမရေးရာအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာချဉ်းကပ်မှုများတွင်အထူးစိတ် ၀ င်စားစွာဖြင့်ပညာရေးဆိုင်ရာပုံစံရေးဆွဲခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုသူစိတ်ဝင်စားသည်။
ကိုးကား & အရင်းအမြစ်များ
ကျောက်သား, အီး (1988) ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူထုယဉ်ကျေးမှုကိုတည်ဆောက်ခြင်း။ ဆရာများကောလိပ်စာနယ်ဇင်း။
ကျောက်သား, အီး (2000) ။ ငြိမ်းချမ်းရေးယဉ်ကျေးမှုများ - သမိုင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်။ ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်စာနယ်ဇင်း။
Pse la Latinoamericano de Investigación para la Paz ။ (2020) ။ အသစ်တစ်ခုကိုပုံမှန်အဘို့အ Manifesto။ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် Global Campaign https://www.peace-ed-campaign.org/manifesto-for-a-new-normality/
Corona ဆက်သွယ်မှုများ - အသစ်စက်စက်ကမ္ဘာအတွက်သင်ယူခြင်း။ (2020) ။ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် Global Campaign https://www.peace-ed-campaign.org/tag/corona-connections/
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပCharterိညာဉ်စာတမ်းကော်မရှင်။ (2000) ။ ကမ္ဘာမြေပCharterိညာဉ်စာတမ်း. https://earthcharter.org/wp-content/uploads/2020/03/echarter_english.pdf?x23441
Jenkins, တီ (2019) ။ Reardon ၏ edu-learner လက်တွေ့ကျမှု - နိုင်ငံရေးထိရောက်မှုနှင့်လူမှုအသွင်ပြောင်းမှုအတွက်ပညာပေးခြင်း။ Snauwaert, ((Ed ။ ) ၌, Betty A. Reardon ၏ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်ရှုထောင့်ကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်း - နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်း။ Springer ။ မှရယူသည် https://www.academia.edu/39988174/Reardons_Edu_learner_Praxis_Educating_for_Political_Efficacy_and_Social_Transformation
Kester, K. (၂၀၂၀)။ အမှန်တရား၊ posttruth နှင့် COVID-19 - ပညာရေးဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအချို့။ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် Global Campaign https://www.peace-ed-campaign.org/truth-posttruth-and-covid-19-some-educational-responses/
Morrison ။ ML (2013) ။ အနာဂတ်ဘာတွေများရှိပါသလဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးတွင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် Global Campaign https://www.peace-ed-campaign.org/what-the-future-holds-trends-in-peace-education/
Morrison, ML (2012) ။ အနာဂတ်တီထွင်မှု - ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းကင်းသောကမ္ဘာကိုပုံဖော်ခြင်း။ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် Global Campaign https://www.peace-ed-campaign.org/futures-invention-imaging-a-fossil-free-world/
Reardon, ခ (1988) ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတာ ၀ န်ယူမှုအတွက်ပညာပေးခြင်း - ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက်ဆရာဒီဇိုင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ K-12။ ဆရာများကောလိပ်စာနယ်ဇင်း။
Reardon, ခ (2009) ။ utopia မှကြိုဆိုပါတယ်: ဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် Global Campaign https://www.peace-ed-campaign.org/welcome-to-utopia-reflections-on-realities-and-possibilities/
Reardon, ခ (2013) ။ ပြည့်စုံသော / အရေးကြီးသောငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့်အယူအဆဆိုင်ရာရှုထောင့်များ။ Trifonas, PP & Wright, B. (Eds ။ ) တွင် အရေးကြီးသောငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး: ခက်ခဲသောဆွေးနွေးမှုများ။ Springer ။ မှရယူသည် https://www.peace-ed-campaign.org/wp-content/uploads/2020/05/Meditating-the-Barricades.pdf
Reardon, ခ (2020) ။ ပုံမှန်ပုံစံအသစ်သို့လမ်းလျှောက်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ကြားရေးစနစ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် Global Campaign https://www.peace-ed-campaign.org/reviewing-our-pedagogy/
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ။ (1948) ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကြေငြာချက် (217 [III ကို] တစ် ဦး) ။ မှရယူသည် https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ။ (1999) ။ ငြိမ်းချမ်းရေးယဉ်ကျေးမှုအပေါ်ကြေငြာခြင်းနှင့်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ် ဆုံးဖြတ်ချက်များ / အထွေထွေညီလာခံကမွေးစား (A / RES / 53/243) မှရယူသည် https://digitallibrary.un.org/record/285677/files/A_RES_53_243-EN.pdf
Werner Wintersteiner က Corona အကျပ်အတည်းကထုတ်ဖော်ပြောကြားရာ၌ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းသည်အပြန်အလှန်မှီခိုမှုမရှိဘဲအချင်းချင်းအပြန်အလှန်စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုဖြစ်စေသည်ဟုဖော်ပြသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်ကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့နှံ့နေပြီး၎င်းကိုတိုက်ဖျက်ရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုလိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းပြည်နယ်များသည်အမျိုးသားဥမင်လိုဏ်ခေါင်းနှင့်တုန့်ပြန်နေကြသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုရှုထောင့်သည်ကမ္ဘာ့အကျပ်အတည်းနှင့်သင့်လျော်သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
အားနည်းခြင်းနှင့်ဗိုင်းရပ်စ် - Hammer ရဲ့အခြားအဆုံး
မေလ 5, 2020 သတင်းနှင့်အထူးများ 0
ကူးစက်ရောဂါသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူမှုစီးပွားရေးလှေခါးထစ်၏အောက်ခြေတွင်ရှိသူများသည်ပုံမှန်စနစ်ကျသောဆင်းရဲချို့တဲ့သောအခြေအနေတွင်နေထိုင်ကြသည်ဟူသောအချက်ကိုအပြည့်အဝဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအားနည်းချက်ကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုနိုးထစေခြင်းသည်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက်ချက်ချင်းစိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
ဇူလိုင်လ 8, 2020 CV 0
COVID-19 ကူးစက်ရောဂါသည်နျူကလီးယားလက်နက်များသုံးစွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ဘဏ္,ာရေး၊ Peace Education Scotland သည်ဤပြissuesနာအချို့ကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြရန် ရည်ရွယ်၍ ဆရာများနှင့်အိမ်တွင်းပညာပေးသူများအတွက်သတင်းအချက်အလက်စာရွက်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]